Wednesday, 05 April 2017 22:45
Wednesday, 05 April 2017 22:33
Hariioon Itoophiyaan Gamtaa Awurooppaa waliin qabdu goobanaa jira
Hariiroo biyyi keenya biyyoota addunyaa waliin qabdu yeroodhaa gara yerootti guddataa jira. Haala qilleensa mijaawaafi teessuma lafaatiin biyyattii cinatti kallattiin argamashee sochii dinagdeefi siyaasaaf murteessaa ta’uusaa barbaachisummaa biyyattii addunyaarratti olaanaa taasiseera.
Haa ta’u malee, raafamni siyaasaa biyyoota ollaashee yeroo tokko ho’ee yeroo kaan qabbanaa’u biyyattiirratti dhiibbaa hin uumu jechuu miti. Biyyootni biyya keenya waliin hojjechuuf fedhii qaban akkuma biyyootni misooma biyyattii ija hamaan ilaalan ni jiru. Ammaaf garuu xiyyeeffannaan barreeffama kanaa Gamtaa Awurooppaa wajjin kan walqabatu waan ta'eef achuma fuulleffanna.
Akkuma beekamu jeequmsa biyya keenya keessatti ka’ee tureen walqabatee paartiileen dorgomoon tokko tokko “Mootummaan ummata miidhaa jira” jechuun dhaabbileefi biyyootni addunyaa kamiyyuu haariiroofis ta’e gargaarsaaf fuulasaanii gara Itoophiyaatti akka hin deebisne watwaataa turaniiru.
Haaluma kanaan, Gamtaan Awurooppaa gara jalqabaatti yaada kana kan simate fakkaatus dhumarratti biyya keenyarraa of qusachuurra waliin hojjechuu filateera. Torban darbe gamtaan kun gara biyya keenyaa dhufuun Ministira Muummee, Hayilamaaram Dassaalanyi waliin dhimmoota gara garaarratti marii taasisuun aantummaa biyya keenyaaf qabu ifatti dhugoomseera.
Akka Obbo Haylamaaram jedhanitti mariachi kan xiyyeeffate sanada qindoominaan dhimmoota shoroorkeessummaa ittisuu, misooma dinagdee itti fufiinsa qabu mirkaneessuu, tasgabbiifi nageenya naannolee, daldalaafi investimantii guddisuu ilaalchisee bara darbee gamtichaafi biyya keenya gidduutti mallattaa’ee akkaataa ittiin hojiitti hiikanirratti.
Biyyi keenyas dhimmoota kanarratti kutannoon hojjechuun gara qabatamaatti fiduuf tattaaffii guddaa taasifti. Gama biroonis gargaarsi misooma gamtaan kun gama barnootaafi fayyaa hawaasaa mirkaneessuuf taasisu guddaa ta’uun cinatti fooamii daldalaa biyyi keenya yeroo ittaanuttis Beljiyeem, Biraazelesitti qopheesituufis gumaatni gamtichaa olaanaa ta’a.
Pireezidaantii ittaantuun gamtichaa Aadde Federiikaa Mogorooniis gamtichi biyya keenya waalii dhimmoota gara garaarratti hojjechuuf fedhii guddaa qaba jedhu. Rakkoo nageenya ollootasheen walqabatee gargaarsa biyyi keenya baqattootaaf taasiftuufi waliin marii mootummaan paartiilee siyaasaa waliin eegale cimee akka itti fufuuf gamtaan kun deggarsa barbaachisu taasisuun olola kaleessa,”Gamtaan Awuroopppaa Itoophiyaarraa fuula deebifateera” jedhu ifatti fashaleessu.
Daayirektarri Olaanaan Dhimmoota Awurooppaa, Obbo Kaasaa Gabrayohaannis dabalataan akka jedhanitti, gamtichi barana godaansaan walqabatee rakkoo hamaa keessa turus kanaan danqamee biyya keenya deggaruurraa boodatti hindeebine. Haaluma kanaan deggarsi barana biyya keenyaaf taasises olaanaadha. Ammas taanaan haala deggarsi kun itti fufuufi dhimmoota gara garaarratti waliin hojjechuuf fedhii gamtichi maricharratti argisiise olaanaadha.
Walumaagalatti, fedhii Gamtaan Aurooppaa dhimmoota gara garaatti biyya keenya waliin hojjechuuf qabu kan lalisaa deemu malee kan cooligaa miti. Tattaaffii biyyi keenya nageenya gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf taasisaa jirtuufi baqattoota lubbuusaanii oolfachuuf garashee dhufaniif da’oo ta’uunshee qalbii gamtichaa daran hawwateera.
Kana malees, jalqabbii marii mootummaan paartiilee dorgomtootaa waliin taasisuuf carraaqaa jirus gamticha biratti xiyyeeffannaa guddaa argateera.
Torban kana/This_Week 17688
Guyyaa mara/All_Days 1442468